Friday April 05, 2019 - 21:19:48 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Ganacsade Axmed Geelle Arab waa nin ilbax ah.
- Sida uu u wakiishay afhayeenka, waliba uu ugu dhiibayo waraaqaha iyadoo muuqaal ah waa cashar inagu cusub.
-Afhayeenku wuxuu sheegay in dabku ka kacay "SAAMI NA SII" laakiin halkaas laaxin baa ku jira, waxbaa jira inaga qarsoon. SAAMI dagaalkani uu ka weyn yahay.
- Afhayeen ummadeed ma ahayn ee wuxuu ahaa mid Saamiley shirkadeed u hadlayey.
-Wuxuu ku gefey Xuquuqda muwaadinnimo ee Axmed Geelle Arab. Taas oo uu dastuurka Soomaalilaan dhigayo. " Qof kasta oo aabbihii ku noolaa Soomaalilaan ka hor 1960-kii waa muwaadin u dhashay Soomaalilaan".
- Wuxuu ku gefey Xuquuqda Shirkadda SBI oo uu ka been sheegay lacagta lagu dhisay, oo uu ku sheegay in Banginga Jabbuuti laga soo dhacay.
- Halkaas waxa ka cad oo inoo muuqata in Muuse Biixi aanu dhex ahayn, wax ilaahay qaddaraba.
Way muuqataa inaan arrintu SAAMI ahayn ee ay jirto wax qarsoon oo aan cidna loo sheeggini'e, waxay ahayd inuu boogtaa dhayo oo la heshiiyo Ismaaciil Geelle oo ay in badan soo wada macaasheen. Isna xaal ogyihiin.
- In cid kasta oo Ismaaciil Cumar Geelle iyo Axmed Cismaan Geelle heshiisiin karta ama ugu yaraan dabkan bakhtiin karta la helo.
- Dahabshiil, Axmed Jimacaalaha Telesom iyo Hormuud, waa inay safka hore ka galaan arrinkan.
Saint Louis Missouri, USA.